Ellicott wuxuu ku dhawaaqay tikniyoolajiyad cusub oo cusub - Ellicott Dredges Blog
SANADKA CUSUB EE DIIWAANKA FARSAMADA EE FARSAMADA EE DIIWAANKA EE KHATARTA KU SAMEEYSA
Qulqulka ugu dhaqdhaqaaqa badan ee weligiis la dhisay. Mashiinka cusub ee loo yaqaan '8-inch' (203 mm) dheecaan, jaranjarada wareejinta korantada (SLD) ee dib u soo kabashada dabada iyo dayactirka barkadaha oo leh seddex (3) gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida, iyada oo aan la isticmaalin fiilooyin.
Ellicott® International, oo ah hormuud u ah soosaarista dredge bay'ada, waxay ku dhawaaqdaa nooc cusub oo dredge kaas oo runti kaligiis soconaya. Dhererku wuxuu ku dhaqaaqayaa seddex qulqulka dhaqdhaqaaqa ama xamuul safraya oo u oggolaanaya inuu ku sii jiro booska saxda ah mar kasta maxaa yeelay had iyo jeer laba weji ayaa si adag ugu xiran hoose. Wuxuu ku socdaa buuqa inta uu dusha dul dul saaran yahay. Mowqifkan wuxuu u oggolaanayaa qofka wax gooya inuu horay ugu socdo cutubka xiga isaga oo aan booska ka lumin. Teknolojiyaddan ayaa sidoo kale awood u siineysa qulqulka inuu gadaal gadaal u dhaqaaqo si uu u soo qaato shey wasakhaysan oo laga yaabo inuu seegay weli weli wuxuu ku jiraa isla meeshii saxda ahayd si loo sii wado qulqulka hore.
Jaranjarada cusub ee isku-wareejinta ee Ellicott® Brand oo leh xNUMX gawaarida gawaarida gawaarida safarka iyadoo aan la isticmaalin fiilooyin.
Qulqulka cusub wuxuu isku deyayaa inuu saxeexo qulqulka iyo meeleeynta gaar ahaan wabiyada ay ka jiraan wabiyada. Halka ay heerka dhimashadu ay halis ugu jirto in ay waayaan booskooda duruufaha jira awgeed, tanina maahan. Sidoo kale ma jiraan fiilooyin ay ku shaqeeyaan qulqulka biyaha sidaa daraadeedna fiilooyinku kuma lug lahaan karaan waxyaabaha wasaqaysan ee sababa xumaanta aan loo baahnayn. Xitaa salka adag wuxuu leeyahay muuqaal koronto hoos udhaca kaasoo u horseeda xajinta adag ee salka hoose.
Ellicott® nooca loo yaqaan 'dredge brand' waxaa lagu qalabeeyaa waalka khaaska ah ee biyaha hoostiisa mara kaas oo ka hortaga xarigga xarigga wuxuuna u oggolaanayaa qaddarka saxda ah ee walxaha wasakhaysan in si joogto ah loo soo shubo, iyadoon loo eegin xaaladda hoose ee salka. Xaalado badan, gaar ahaan deegaanka wabiga, wasakhdu kuma koobna oo keliya jiinka laakiin sidoo kale waxay u gudubtaa gunta asalka ah ee ciidda ama dhoobada. Mashiinka wax soo gooyaa wuxuu leeyahay awood ku filan oo uu kaga saaro wasakhdaas lakabyada khafiifka ah. Unuggu wuxuu ka saari karaa jiirka dhererkiisu yahay 22 fuudh (7 m) ka hooseeya dusha biyaha.
Cutubku wuxuu leeyahay kontaroolo u sheegaya hawlwadeenka qulqulaha sida saxda ah ee isku dhejinaya xarkaha ku jira. Cutter wuxuu u weecin karaa u dulqaadashada hal inji oo lagu daray ama laga jaray hal inji (25 mm) taas oo muhiim u ah, gaar ahaan waxyaabaha wasakhoobaya. Koontaroolada wadayaasha waxay dib ugu celiyaan dib-u-hakinta weelka biyaha ilaa ugu yaraan ugu yaraan. Dhamaan howlaha kala-baxa ah waxay kuxiran yihiin nidaamyada meelaynta adduunka.
Jaranjarada jaranjarooyinka bay'adda ayaa ah horumarintii ugu horreysay ee weyn ee adeegsaneysa teknoolojiyadda noocan ah sannado badan. Kuwani Ellicott® Meelaha biyo-qabatinnada ee loo yaqaan 'Swinging Ladder' waxaa loo isticmaali karaa harooyinka iyo kanaallada ciriiriga ah sida kumanaanka mayl ee marinnada Florida gudaheeda kuwaas oo u baahan doona biyo-gelin. Ellicott® International waxay leedahay hal unug oo hada ka shaqeeya bartamaha-galbeedka USA goobta.
Labada shaqo ee jaranjarada - lulid iyo kor u qaadid / hoos u dhigida - waxaa xakameeya wanan hidde ah. Sababtoo ah wanka kor u qaadaya oo hoos u dhigaya jaranjarada wuxuu ku adeegsan karaa xoog hoos u gooyaha, wuxuu hubiyaa in gooyuhu uu xiriir buuxa la leeyahay qashinka wasakhaysan markasta oo aanu ka boodayn, taas oo sababi lahayd jahwareer aan loo baahnayn.
Kala-baxa ayaa lagu heli karaa qulqulka qulqulaya ee 1,500 illaa 6,000 galan / daqiiqad (5,700 illaa 22,700 liitar / daqiiqaddii). Waxay aad ula jaan qaadi kartaa nidaamyada daaweynta wasakhda wasakhaysan sababta oo ah boqolkiiba saxda ah ee slurry ee nidaamka dhuumaha si joogto ah.
Qulqulka gawaaridu waa mid mobiil ah oo ka dhigi kara midig iyo bidix, leexleexad, iyo xitaa isbarbar dhigga laftiisa sida baabuurta la dhigto. Dheecaanku wuxuu noqon karaa naaftada ama koronto.